Tag: kiisaska isticmaalka | Martech Zone
Tag: kiisaska isticmaalka
Maxay yihiin Su'aalaha laga Jawaabayo si loo Qiimeeyo Istaraatiijiyadda Suuqgeynta ee Shirkaddaada?
Arbacada, Janaayo 29, 2020 Khamiis, Janaayo 30, 2020 Douglas Karr
Waxaan la shaqeynayaa rajo hada ogtahay inay u baahan yihiin caawinaad joogitaankooda dhijitaalka ah iyo dadaalada suuq geynta… laakiin ma yaqaaniin meel ay ka bilaabaan iyo wadada loo baahan yahay si loo gaaro halka ay u baahan yihiin In kasta oo aan si ballaadhan wax uga qoray safarka agil suuq geynta si loo horumariyo bisaylkaaga suuqgeynta, ma hubo inaan waligay wax ka qoray walxaha lagama maarmaanka u ah guusha. Markaan la shaqeynayo macmiilkan, waxaan wareysanayay iibkooda, suuqgeyntooda, iyo
U beddel PDF-yadaada mobilo, Web-Ready, Wadaag wadaag ah
Khamiista, Noofembar 6, 2014 Douglas Karr
Xaqiiqdii qof kastaa wuxuu leeyahay kiisas adeegsi, waraaqo daabacan iyo dammaanad iib ah qaab PDF ah. In kasta oo aaladaha badankood ay leeyihiin akhristayaasha PDF maalmahan, haddana aqristayaashaas looma fiicna inay ka akhriyaan aaladaha iyagoo awood u leh inay la wadaagaan bulsho ahaan ama ay toos ugu dhex geliyaan waxyaabaha aad ka kooban tahay. Simplebooklet waxay ku siisaa codsi fudud oo aad ku soo rarto oo aad ku martigeliso buugaag yar yar oo laga sameeyay PDF-yada ama laga sameeyay xoq. Buug-yaraha waa la soo dhejin karaa, la dhejin karaa, waa la qori karaa, waa la wadaagi karaa, waa la diri karaa, waa la diri karaa, macaamiishiisuna waa la dhejin karaa waana la soo dejin karaa macaamiisha meel kasta oo ay joogaan.
Fure u ah xiriiriyeyaal badan oo aan la wadaago iyo qoraalada aan ku qoro balooggan ayaa ah otomaatig. Sababta ayaa ah mid fudud… hal mar, suuqleyda ayaa si fudud macaamiisha ugu rogi kara astaan, astaan, jingle iyo xoogaa baakado fiican ah (Waxaan qirayaa in Apple wali ku fiican tahay tan). Dhexdhexaadintu waxay ahaayeen uni-jaheyn. Si kale haddii loo dhigo, Suuqleyda ayaa sheegi kara sheekada macaamiisha ama macaamiisha B2B waa inay aqbalaan… iyadoon loo eegin sida ay sax u tahay.